Video:-Kulan taariikhiya oo dhexmaray hogaamiyayaasha Maraykanka iyo K.Waqooyi – Idil News
Video:-Kulan taariikhiya oo dhexmaray hogaamiyayaasha Maraykanka iyo K.Waqooyi
Waxay isku salaameen hoteel loo dalxiis taga oo ku yaalla Jasiiradda Sentosa ee dalka Singapore ka hor inta ay u billaabanin wadahadallada,hoos ka daawo muuqaalka.
Hakan hoose ka daawo muuqaalka
Madaxweynaha Kuuriyada Koofureed Moon Jae-in, oo loo tiriyo ninka wadada u xaaray kulanka Trump iyo Kim, ayaa sheegay inuu aad ugu rajo weynyahay hubkadhigista niyukleerka Pyongyang iyo nabad ka islaaxda gacanka Kuuriya.
Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa wariyaasha u sheegay in Shiinuhu rajeeynayo in wadahadalada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu danbeynti si rasmi ah usoo gaba gabeyn doonaan dagaalka Kuuriya.
Ra’isul wasaaraha Japan Shinzo Abe, oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka ee ka falceliyay kulanki Trump iyo Kim, ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku naalloon doonto mustaqbal ifaya haddii ay ku toosto tubta wanaagsan.
Wasiir-kuxigeenka arrimaha dibedda dalka Ruushka Sergei Ryabkov ayaa sheegay in Moscow ay diyaar u tahay in labada dhinac ka caawiso hirgelinta heshiiskaan,hoos ka daawo muuqaalka.